Kulanweynaha LO waxa uu dhici doonaa dhamaadka asbuuca - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulanweynaha LO waxa uu dhici doonaa dhamaadka asbuuca
La daabacay fredag 25 maj 2012 kl 09.41
LO oo ah ururka iskutaga shaqaalaha ugu weyn Sweden ayaa kulankisii 27 sabtida iyo axada ku yeelanaya fulkets hus magaladaan Stockholm. Kulanka ayaa lagu dooran doonaa gudoomiyo cusob. LO ayaa xiligaan ku jira xalaad cakiran kadib markii uu ururku dhumiyey dadyow badan oo kamid ahaa, sidoo kale waxaa ururka ka dhex jira muran ku saabsan mushaaraadk haweenka.
Dhaq dhaqaaqii sannadkaan ee wada xaajodyada mushaaradka Ayey golaha sare ee LO isku dayeen in ay mideeyaan dalabka mushaaraadka laamaha kala gaedisan ee kamidkaa ururkaas si loo kurdhiyo mushaaraadka haweenka, lakiin taas waa lagu guul daraystay. Sida ay sheegtay haweenayda xilka gudoomiyanimada ururkas hada ka degtay Wanja Lundby- Wedin:
-waxaan ku guuldaraysanay in aan mideyno lacagaha dheeradkaa ee la rabay in ay dalbadaan laamaha ay ku badan yahiin haweenku. Heshiis ayaan ku ahayn in kor loo qaado mushaarka haweenka si kor loogu qaado sinaanta mushaarka raga iyo hweenka. Lakiin heshiis kuma aanan ahayn inta ay lacagto noqonayso. Ayey tiri Wanja Lundby Wedin.
Ruuxa noqon doona gudoomiayaha LO ayaa ah Karl-Peter Thorwaldsson. Waxaa loo malaynayaa in arintaa ku saabsan sinaanta mushaaradka ay noqon doonto ariamaha ugu adag oo uu la kulmi doono marka uu qabto xilka ururkaas.